बिना काममा रेल किन ल्याउने ? : गगन थापा – Himaltimes.com
बिना काममा रेल किन ल्याउने ? : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षी योजना रेलमार्ग र जलमार्गमाथि प्रश्न गरेका छन्। एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सीजले राजधानीको पर्यटन बोर्डमा आयोजना गरेको जलयात्रा वर्तमान र भविष्य विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थापाले रेलमार्गमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
थापाले भारत र चीनबीचमा रेलवे बनाउन आवश्यकै नरहेको दाबी गरे। भने, हामीले रेलवे बनाउने हामीले पानी जहाज ल्याउने हामीले हवाइ अड्डा बनाउने, बनाउने भन्दै गर्दा केका लागि बनाउनेरु भारत र चीनलाई सामान बेच्छौ भन्छौ। भारत र चीनलाई सामान बेच्न नेपालमा बाटो बनाउनुपर्दैन। यो भ्रममा नहोस।
२०३३ मा वीपीले युनिभर्सिटीका विद्यार्थीलाई जम्मा गरी भन्नुभएको थियो, सडक बन्यो भन्दैमा विकास भयो भन्ने होइन। तपाईको गाउँमा सामान लिएर आएका ट्रक फिर्ता जाँदा भरी गयो भनेमात्र विकास हो। नेपालमा आउने रेललाई हामी भरेर पठाउन सक्छौ कि सक्दैनौ ?
दुई देशबीच अर्बौको व्यापार भइरहेको बेला रेलवे र जलमार्ग काम लाग्ने कुरो नभएकोसमेत बताए। ुहान्ड्रेड बिलियन युएस डलरको टार्गेट राखेर व्यापार चलिरखेको बेला यो काम छैन, थापाले भने।
कार्यक्रममा उनले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने र पर्यटन विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। यसका लागि र्‍याफ्टिङको पनि एउटा आधार भएको उनले बताए। त्यसैगरी उनले समृद्धिका लागि सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेक्स्ट सुपर टप्स मोडल नेपाल २०१८ को उपाधि स्वेता तिमल्सिना र भाइचुङ राइले जिते
क्रिकेटर लामिछानेले गाएको पहिलो गीतको भिडियो सार्वजनिक(भिडियो)
किन भने मनोजले “स्वीकृति तिमि लाई दिएको छु” (भिडियो सहित)
“हरेक पल”मा दुर्गा र निराजन (भिडियो सहित)
प्याजेन्ट नेपालको आयोजनामा ३४ उपाधी बिजेता तथा २५ आयोजकको एकै र्याम्प शोमा
मिती तोकेको दिन पार्टी एकता घोषणा हुँदैन: प्रचण्ड
मिस गुरुङ्ग ईन्टरनेशनलको दोश्रो संस्करणको तयारी तिव्र, देशैभर जेष्ठ १२ बाट अडिसन शुरु